isichithile inkantolo isicelo sikazuma - Ilanga News
Home Izindaba isichithile inkantolo isicelo sikazuma
isichithile inkantolo isicelo sikazuma
SILOKHU simbheke njalo isamba-ne ezinkantolo uMnu Jacob Zuma (osesithombeni) owayengumenga-meli waseNingizimu Afrika, nje-ngoba iNkantolo eNkulu yokuDlu-liswa kwamaCala eseBloemfonte-in, imchithile esicelweni sakhe njengoba wayedlulise isinqumo seNkantolo eNkulu yasePretoria sango-2018, esasithi kumele azi-khokhele izindleko zakhe zamacala enkohlakalo.
Isinqumo seNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamaCala siphume ngoLwesibili. Sihlobene nokuphu-nza kwemizamo kaMnu Zuma yokuba kubuyekezwe umbiko kaSolwazi Thuli Madonsela – owayengumvikeli womphakathi ngaleso sikhathi – omayelana nokuqhwagwa kombuso (state capture) yidlanzana, okuyiwona owaholela ekutheni kusungulwe isi-gcawu esiphenya ngale nkohlakalo, esiholwa nguMahluleli Raymond Zondo.
Ngo-2018, kwaqubuka imibiko ethi umbuso kawusazimisele ngokukhokhela amacala enkohla-kalo abhekene noMnu Zuma, ngaleso sikhathi inkantolo yakhi-pha umyalelo wokuthi ummeli wombuso, kumele enze konke okusemandleni ukuthi imali yabakhokhi bentela eyayikhokhwe kuleli cala, ibuye injengoba injalo.
IJaji Aubrey Ledwaba, lanquma ukuthi njengabo bonke abantu baseNingizimu Afrika, uMnu Zuma uvumelekile ukuba nabameli, kodwa kumele abakhokhele kwelakhe iphakethe noma asebe-nzise abangakhokhelwa, bakwaLegal Aid Board.
I-DA ne-EFF okungamaqembu aphikisayo, athi ngokwesigaba 3 somthetho iState Attorney’s Act, akukho okugunyaza ummeli wo-mbuso ukuba akhokhele amacala, kunga-khathalekile ukuthi ngabe abhe-kene nomengameli, ngakho-ke kunobulungiswa ukuthi uMnu Zuma makashaye amaphakethe abuyise u-R16 million wezindleko zamacala akhe – owakhokhwa wumbuso.
NoMnu Zuma akazibekanga phansi njengoba wathi ummeli wombuso uvumelekile ngokwesigaba 3 (1), noma isigaba 3 (3) ukuqoka nokukhokhela abameli abazommela.
INkantolo yokuDluliswa kwamaCala ithole ukuthi phakathi kwalezi zigaba zomthetho, uMnu Zuma avika ngazo, akukho ngisho nesi-sodwa esigunyaza umbuso ukuba ukhokhe izindleko zamacala abhekene nabantu abazimele.
“Leso sigaba sigunyaza ummeli wombuso ukuba amele uhulumeni futhi enze umsebenzi ojwayelekile wabameli nezinye izisebenzi zezobulungiswa.
Inhloso yalesi sigaba somthetho wukunika ummeli wombuso umya-lelo womthetho othi kumele amele uhulumeni,” kusho inkantolo.
Ithe uMnu Michael Hulley, owa-yengummeli kaMnu Zuma, waye-ngaqashelwe ukumela uhulumeni, kodwa ukumela uMsholozi siqu.
“Ukuthi uMnu Zuma wayephe-the isikhundla esiphezulu kuhulumeni, akusho ukuthi ummeli wo-mbuso wayemele uhulumeni,” kusho inkantolo.
Previous articleUthembisa lukhulu umqeqeshi weChiefs
Next articleucele utshale inqwaba yamaphoyisa emalokishini agcwele ubugebengu